My World: ပုံဖော်ကြတဲ့အခါ
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, December 08, 2010 Labels: ပုံဖော်ကြတဲ့အခါ, အက်ဆေး
“ရှင် .. ဘယ်နေရာမှာလဲ၊ ဘယ်ရောက်နေလဲ၊ ကျွန်မတို့ workshop အချိန်လေး နည်းနည်းပြောင်းလိုက်ကြတယ်၊ နေ့လည် ၂နာရီခွဲမဟုတ်တော့ဘူး အခု ၁နာရီခွဲမှာ စချင်တယ်၊ သူတို့ ဆရာမတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကျောင်းကိုပြန်ဝင်ကြရမှာမို့ အချိန်နည်းနည်းရှေ့ကိုတိုးလိုက်ရတယ်၊ ရှင် အဆင်ပြေမလားပဲ၊ ကျွန်မတို့ ကလေးတွေ စုံနေကြပြီ၊ သူတို့ ရှင့်ကိုစောင့်နေကြတယ်၊ ကျွန်မတို့ Art Caffe မှာပဲ ရှိနေကြမယ်နော်” အီဗန်နာက ဖုန်းထဲကနေ ခပ်သွက်သွက်ပြောတယ်၊
ကျွန်တော် အကြောင်းပြန်တယ်၊ “အီဗန်နာ .. ငါ အိမ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ အပြင်ရောက်နေတယ်၊ ဆာဗာစင်တာကနေတော့ သိပ်မဝေးဘူး၊ ငါ အမြန်ဆုံးလာခဲ့မယ်၊ အိမ်မှာ ပစ္စည်းတွေ ယူပြီးရင် နာရီဝက်အတွင်း ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်၊ ကလေးတွေကို မင်း ပဲ ကြည့်ထိန်းထားပေးပါ၊ အိုကေ၊ တွေ့ကြမယ်”
ကျွန်တော်နဲ့ အတူ သရုပ်ပြ ကူညီပေးမဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ကိုလည်း အကြောင်းကြားတယ်၊ အချိန်က ချက်ချင်းကပ်နေတော့ အလယ်တန်းကျောင်းဆရာမလေး စနဲရှာနာ နဲနဲနောက်ကျမယ်တဲ့၊ အကူအညီတောင်းတားတဲ့ သူငယ်ချင်းမ ယဲလီနာ ကလည်း သူ အမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါမယ် လို့ ဆိုတယ်။
အိမ်ကို မြန်မြန်ပြန်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အိတ်ကြီး အိတ်သေးတွေထဲ ထည့်တယ်၊ လိုအပ်တဲ့
ပလတ်စတစ်အိတ်တွေအကြီးအသေး အရောင်စုံတွေကတစ်အိတ်၊ မီးပူ နှစ်ခု၊ စက္ကူလိပ်တွေရယ်၊ ကတ်ကျေးလေးတွေရယ်၊ သစ်သား board တစ်ခု၊ extension cord တွေရယ်၊ workshop အပြီး ကလေးတွေကိုပြရမယ့်၊ (အထူးသဖြင့် သိမ်းသွင်းဆွဲဆောင်ရမယ့်) ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်း မေ့မသွားအောင် ကိုယ့်ဘာသာသတိပေးရင်း မှတ်စုစာရွက်သေးသေးလေးကို ထုတ်ကြည့်တယ်၊ အဲဒီဖိုင်ကို သူ ညတွေမအိပ်ပဲ ကြိုးစားပမ်းစားတည်းဖြတ်ခဲ့တာ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြသဖို့ laptop ကိုလည်း မပါမဖြစ် ယူတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူငယ်ချင်း မီလန်က အိမ်ကိုရောက်လာပြီ၊ အသင့်ဖြစ်ကြပြီ၊ ဒီလိုနဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ သယ်ပိုးကြရင်း ဆာဗာစင်တာဆီသို ထွက်လာခဲ့ကြတယ်၊ နာရီကိုကြည့်တယ်၊ ၁နာရီခွဲဖို့ ၁၀မိနစ်၊ ဆာဗာစင်တာက နီးနီးလေးပါ၊ သူတို့အတွက် အချိန်ကိုက် ရောက်နိုင်လောက်ပါရဲ့။
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက် ပလတ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့ စက္ကူတွေဟာ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဟိုဒီမွစာကြဲနေကြပြီ၊ ဒီနေ့ လုပ်တဲ့ workshop က လူငယ်လေးတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး စိတ်ဝင်စားလာအောင် ဆွဲဆောင်ကြဖို့ အဓိကရည်မှန်းချက်ပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်က စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ပြန်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ဖို့ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေရယ်၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်စက္ကူစတွေရယ်၊ သဘာဝအလျှောက်ကြွေကျနေတဲ့ သစ်ရွက်ခြောက်တွေရယ်၊ ပေါင်းပြီး ပလတ်စတစ်အလှပန်းခြင်းလေးတွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သရုပ်ပြပေးမယ့် workshop ပါ၊ ဒီ workshop တွေကို GreenScreenFest အဖွဲ့သားတွေက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်၊ GreenScreenFest က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုတွေကို လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်အောင် ၃ ရက်လုံး မနက် ၉ နာရီကနေ ည၉နာရီအထိတချိန်လုံးပြသပေးခဲ့ကြတယ်၊
ကျွန်တော်တို့ ဆာဗာစင်တာရဲ့ အ၀င်ပေါက် ညဘက်ခြမ်းလေးထဲက Art Caffe ထဲကိုဝင်သွားကြတော့ ကော်ဖီဘားရှေ့ အလယ်တန်းကျောင်းသားလေးတွေ အယောက် ၃၀ လောက် တစ်စုကိုတွေ့တယ်၊ အိုး... ကလေးတွေ နည်းမှမနည်းပါပဲ၊ လူငယ်လေးတွေက ကျွန်တော်နဲ့တောင် မတိမ်းမယိမ်း ထွားထွားကျိုင်းကျိုင်းလူငယ်လေးတွေ၊ မိန်းကလေး ယောက်ျားလေး တစ်ဝက်စီလောက်ပဲ၊ အီဗန်နာက ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ကြည့်ပြီး “ဟော ... လာကြပြီ” လို့ ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဦးခေါင်းလေးတွေ ကျွန်တော်တို့ဘက် အားလုံး ပြိုင်တူလှည့်ကြည့်ကြတယ်၊ နောက်ထပ် ကလေးတွေ နှစ်ဖွဲ့တွေ့တယ်၊ ပရိုဂျက်တာရှေ့မှာ ရှင်းပြနေတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်နဲ့အတူ ကလေးတွေ တစ်ဖွဲ့ရယ် နောက်တစ်ဖွဲ့က ယောက်ျားလေးတွေချည်းပဲ သူတို့ workshop တွေ အသီးသီး တက်တက်ကြွကြွ လုပ်နေကြတယ်၊ ကျွန်တော်လည်း ခပ်သွက်သွက်ပဲ ကလေးတွေကို မိတ်ဆက်ရင်း သရုပ်ပြဖို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းပဲ စရတော့တယ်၊ ဆယ်ကျော်သက် ကလေးငယ်တွေအရွယ်က ထိန်းရသိမ်းရအခက်ဆုံးပဲ၊ သူတို့ စိတ်ပါဝင်စားလာအောင်ပြောဆိုဖို့ဆိုတာ သိပ်ခက်တယ်၊ အာရုံတစ်ခုတည်းမှာ သူတို့ကြာရှည် မထားနိုင်ဘူး၊ ခု ဒီမှာ ဒါလုပ်နေပေမဲ့ ခဏလေးနဲ့ တခြားဟာ ပြောင်းလုပ်ဦးမယ်၊ လူကြီးတွေပြောဆိုဆုံးမတာကိုဟုတ်မဟုတ် ပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ် ဆန့်ကျင်လာတတ်ကြတဲ့ အရွယ်လေးတွေ၊ ကျွန်တော် ဒါကို သိထားပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ workshop နဲ့ သူတို့ ကို ဘယ်လောက်ကြာအောင် စွဲဆောင်ထားနိုင်မလဲ ကျွန်တော် စမ်းသပ်ကြည့်ရမှာပဲ၊
ကလေးတွေက ကျွန်တော့်အရှေ့မှာ ဘေးဝဲယာ၊ အလယ်၊ စားပွဲရှည်လေးတွေ ဆက်ထားတဲ့ စားပွဲလေးတွေမှာ စုစုစည်းစည်းထိုင်နေကြတယ်၊ ကျွန်တော်အတွက် စားပွဲရှည်တစ်ခုရှိတယ်၊ အီဗန်နာက “ရှင် .. ကျွန်မ ပြင်ဆင်ထားတာ အားလုံးအဆင်ပြေရဲ့လားပဲ၊ သူတို့လေးတွေ သိပ်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လို့တော့ ကျွန်မထင်တယ်၊ ကဲ အဆင်ပြေပါစေရှင်” လို့ ဆိုတယ်၊ ကလေးငယ်တွေ အားလုံးကို တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ရင်း “ကဲ ကိုယ်တို့တွေ အင်မတန်ရိုးရှင်းပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အလုပ်လုပ်ကြရအောင်၊ ကိုယ့်ကို မင်းတို့ကူကြမှဖြစ်မယ်၊ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းတော့ ဘာမှလုပ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး” လို့ ကျွန်တော် စကားစလိုက်တာနဲ့ ကလေးတွေဆီက အသံထွက်လာကြတယ်၊ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာကြတယ်၊ လည်ပင်းလေးတွေ ဆန့်ထွက်လာကြတယ်၊ ကျွန်တော်လည်း ကလေးတွေကို ပလပ်စတစ်အိပ်ကြီး၊ အိပ်သေး အရောင်စုံ၊ နဲ့ စက္ကူ၊ သတင်းစာ တွေကို အစု ၃ စု ခွဲပြီးပေးလိုက်တယ်၊ ပလပ်စတစ်အိတ်တွေကို ပန်းအိုးတစ်ခုစာ အမြင့်လောက် ကပ်ကျေးလေးတွေနဲ့ ညှပ်ထားပေးပါလို့ ပြောတယ်၊ စက္ကူစလေးတွေကိုတော့ ကြိုက်သလို ပုံစံလေးတွေ ညှပ်လို့ရတယ်၊ စိတ်တိုင်းကျလုပ်ပါဆိုတော့ သူတို့ ရယ်မောကြတယ်၊ မဆိုးလှပါဘူး၊ ကလေးတွေ သွက်သွက်လက်လက် ကပ်ကျေးလေးတွေနဲ့ညှပ်ကြတယ်၊ သူတို့ ညှပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်စားပွဲပေါ်မှာ သစ်သား board အပြားကို တင်၊ အဲဒီပေါ်မှာ စက္ကူပြား အကြီးကို ဖြန့်ချပြီး မီးပူကို extension cord သုံးပြီး တပ်တယ်၊ ပြီးတော့ “ပထမဆုံးဘယ်အဖွဲ့ အရင်လာမလဲ၊ အပြာရောင်၊ အနီရောင် ပလပ်စတစ်ယူလာခဲ့ပေးပါ” ဆိုတော့ ဘယ်ဘက်အဖွဲ့က ကလေးတစ်ယောက်မတ်တပ်ထရပ်တယ်၊
“ကဲ အခု ဘယ်သူ အိမ်အလုပ်လုပ်သလဲ ဆိုတာ သိရတော့မယ့် အချိန်ပေါ့”
ကလေးတွေ ညံညံစီစီ ရယ်မောကြတယ်၊
“ပလပ်စတစ်အပြာရောင်၊ အနီရောင်လေးနှစ်ခုကို ဒီလိုပြန့်အောင်ဖြန့်မယ်၊ ဟောဒီ စက္ကူပြားကြီးကို အပေါ်က ဖုံးကာပြီး ကိုယ်တို့မီးပူတိုက်မယ်၊ ကြေနေတဲ့ အကျီကို ဆန့်သွားအောင်တိုက်သလိုပါပဲ၊ မတူတာတစ်ခုက စက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲ ဖိလိုက်၊ ဘေးကိုရွှေ့ပေးလိုက် လုပ်ရမယ်”
“ကျွန်တော် အိမ်မှာ အမေ့ကို မီးပူကူတိုက်ပေးနေကြပါ၊ အခု ကျွန်တော့် လက်ရာကိုမြင်ရင် ကျွန်တော် အပိုမပြောဘူးဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပဲ” လို့ ကျောင်းသားလေးက အရွှန်းဖောက်တယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ တဟားဟားရယ်ပါတယ်၊ ပလပ်စတစ်ပြားလေးတွေက အပူငွေ့နဲ့ ပျော်ပြီး အရောင်မတူတော့ အရစ်အလိမ်ဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ်ပြီးကပ်သွားကြတယ်၊ “အိုး .. သိပ်တော်တဲ့ သားလိမ္မာလေးပဲ” ကျွန်တော် ချီးမွမ်းတယ်၊ အားလုံး လက်ခုပ်တီးကြတယ်၊
“နောက်တစ်ဖွဲ့က ဘယ်သူလာမလဲ၊ စက္ကူစလေးတွေပါယူလာခဲ့နော်၊ ပလပ်စတစ် ဒီဇိုင်းလှလှပါတဲ့ အိတ်တစ်ခုကိုယ့်မှာ ရှိနေတယ် ၊ ဒါကို ကိုယ်သုံးမယ်၊ အ၀ါရောင် ပလပ်စတစ်လေးပါယူခဲ့ပေးပါဦး”
နောက်ကလေးတစ်ယောက် ထလာတယ်၊ သွက်သွက်လက်လက်ပါပဲ၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လည်း ရှိနေကြပုံပေါက်တယ်၊ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ကြောက်ရွံ့ဟန်မရှိကြသလို၊ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလည်း စိတ်ဝင်တစားလိုက်လုပ်ကြပါတယ်၊ တခြား ဆရာမတစ်ယောက်ကမေးတယ်၊ သူ့ကလေးတွေတစ်ဖွဲ့ကိုလည်း ဒီမှာ လာစုချင်တယ်တဲ့၊ ပရိုဂျက်တာနဲ့ရှင်းပြနေတဲ့ ကလေးတွေတစ်စု ဒီဘက်ကို ပြောင်းလာကြတယ်၊ ခုံလေးတွေ သူတို့ဘာသာဆွဲယူပြီး လာထိုင်ကြတယ် ကလေးတွေ တော်တော်များလာကြပြီ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ဒီကလေးတွေကို ထိန်းရတော့တာပဲ စနဲရှာနာနဲ့ ယဲလီနာလည်း ရောက်မလာကြသေးဘူး၊ ကလေးတွေက စိတ်ဝင်တစားရှိကြတော့ မဆိုးလှပါ ပျော်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်၊
ကျွန်တော့်မှာရှိနေတဲ့ နေကြာပန်းပုံပါနေတဲ့ ပလပ်စတစ်အိတ်က ပန်းပုံနေရာတ၀ိုက်ကို ဖြတ်ယူတယ်၊ နေကြာပန်းပေါ်မှာ သစ်ရွက်ခြောက်လေးတွေ ထပ်တယ်၊ အပေါ်က ပလစ်စတစ်အ၀ါရောင်လေး ကပ်တယ်၊ ပြီးတော့ စက္ကူပြားကြီးနဲ့ကာတယ်၊ မီးပူနဲ့ဖိလိုက် ရွှေ့လိုက် ကလေးမလေးက သွက်သွက်လေးလုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ စက္ကူစကြီးကိုဖယ်တယ်၊ စက္ကူစအောက်မှာ ပလပ်စတစ်တွေပျော်ပြီး သစ်ရွက်ပေါ်မှာကပ်ရင်း ပေါ်လာတဲ့ ဒီဇိုင်းအခက်အနွယ်လေးကို သူလေးက အံ့သြပြီး .. “အိုး .. လှလိုက်တာ” လို့ လွှတ်ကနဲ ရေရွတ်တယ်၊ နောက်တစ်ဖွဲ့က ကလေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်၊ လူငယ်လေးက “ကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးယူခဲ့မယ်၊ အဖြူရောင်မသုံးရသေးဘူး” လို့ သူ့စိတ်ကူးကိုပြောတယ်၊ ကျွန်တော် အားပါးတရထောက်ခံလိုက်တယ်၊ “အိုကေ .. သိပ်ကောင်းတာပဲ၊ မီးပူတိုက်ကြဦးစို့ရဲ့”၊ လူငယ်လေးရဲ့ ပလပ်စတစ်အပြာစလေး ကပ်ပြီးတဲ့အခါ၊ ပလပ်စတစ်အထူအပါး အနေတော်ဖြစ်သွားပြီ၊ ပန်းအိုးလေးလုပ်ကြဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီ၊ အလျား၊ အနံ ညီညာအောင် ကပ်ကျေးနဲ့ ညှပ်ကြတယ်၊ ပြီးတော့ အ၀ အကျဉ်းအကျယ်ပန်းအိုးအရွယ်လောက် လိပ်ပြီး အဆက်နေရာအတွင်းပိုင်းမှာ စက္ကူပြားကိုခံတယ်၊ ပြီးတော့ အပေါ်ကနေ မီးပူနဲ့ဖိတယ်၊ အဆက်နေရာက ကပ်သွားပြီ၊ ဒါနဲ့ စလင်ဒါပုံဖြစ်နေတဲ့ ပန်းအိုးကို ထောင့်လေးတွေနေရာအတွက် စက္ကူပြားကိုပဲခံပြီး အရာပေးတယ်၊ ပန်းအိုလေး လေးထောင့်စပ်စပ်ကျအောင်ပါ၊ အ၀ိုင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ အဆင့်ကိုကျော်လို့ရတယ်လို့ ကလေးတွေကို ကျွန်တော်ပြောတယ်၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ကျွန်မကတော့ အ၀ိုင်းလေးကြိုက်တယ်လို့ ပြောလိုက်သေးတယ်။
ပြီးရင်တော့ အောက်ခံအတွက် လက်ဆောင်တွေထုတ်ပိုးသလိုပါပဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားနှစ်ခုကို အတွင်းဘက်ကိုဖိတယ်၊ နောက် အနံနှစ်ဘက် အတွင်းဘက်ကို ဖိပြီးထပ်တယ်၊ ကျွန်တော် အသင့်ယူလာတဲ့ လက်ကိုင်နဲ့ သစ်သားလေးထောင့်ပုံစံတုံးစားပွဲပေါ်မှာ ထောင်တယ်၊ ပန်းအိုးလေးကို စောက်ထိုးထား၊ စွပ်လိုက်ပြီး စက္ကူပြားကာတယ်၊ ပြီးတော့ မီးပူဖိတယ်၊ ဒါဆို အတွင်းဘက်ကို လေးဘက်လေးတန် ခေါက်စလေးတွေ ပုံစံကျကျ ကပ်သွားကြပြီ၊ စက္ကူပြားကာရတာကတော့ ပလပ်စတစ်တွေ အပူပြင်းပြင်းမထိအောင် ပြီးတော့ မီးပူမှာ ကပ်ပြီး ပုံစံပျက်မသွားအောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ သဘောပါပဲ၊ ပန်းအိုးပုံစံလေးပေါ်လာပြီ၊ ပြီးတော့ ထိပ်ပိုင်းလေးကို ဒီဇိုင်းလေးတွေဖော်ပြီးညှပ်ထုတ်ပစ်ဖို့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်၊ မိန်ကလေးတွေက နည်းနည်းအနုစိတ်တာဆို ပိုပြီး စိတ်ရှည်ကြတယ်မဟုတ်လား၊ ကလေးမလေးက တြိဂံပုံ ထိပ်ချွန်လေးတွေပုံဖော်ပြီး ညှပ်တယ်၊ စက်ဝိုင်းခြမ်းပုံစံလေးတွေညှပ်သွားလဲ လှတာပါပဲ၊ ပြီးသွားတဲ့အခါ ပန်းအိုးလေး ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီး၊ အနီရောင် စက္ကူစလေးကို ပန်းပုံလေးတွေညှပ်ပြီး ပန်းအိုးပေါ်မှာ ကပ်ရင်း မီးပူထိပ်ချွန်းလေးနဲ့ အသာဖိတယ်၊ ပန်းပွင့်လေးကပ်သွားတယ်၊ အစိမ်းရောင်သစ်ရွက်ပုံလေးနှစ်ခု အသေးအကြီး ညှပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ မီးပူထိပ်လေးနဲ့ပဲ ဖိတယ်၊ သစ်ရွက်လေးနှစ်ရွက်နဲ့ ပန်းပွင့်လေးပါတဲ့ ပလပ်စတစ်ပန်းအိုးလေး ကျွန်တော်တို့ ရခဲ့ကြပြီ၊ အားလုံးကို အနီးကပ်ကြည့်ကြဖို့ လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်တယ်၊ ကလေးတွေ တစ်ယောက်ဆီ ကိုင်ကြည့်ကြတယ်၊ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ တို့ထိကြည့်တယ်၊ မီးပူ အပူရှိန်ကြောင့် ပျော့ပြီး ပျော်ဝင်ကာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ အစင်းအရစ်လေးတွေ ကိုင်ကြည့်ရတာ ထူးဆန်းတယ်လို့ ကလေးတစ်ယောက်က ပြောတယ်။
“ကဲ၊ ဒါဆို ပန်းဝန်းကျင်က အပိုဖြစ်နေတဲ့ ပလပ်စတစ်တွေ စက္ကူစတွေ နဲ့ သဘာဝကပေးတဲ့ သစ်ရွက်ခြောက်လေးတွေပါသုံးပြီး ပလပ်စတစ်ပန်းအိုးလှလှလေးတွေ အခုပဲ စုပေါင်းလုပ်ကြည့်ကြပြီးပြီ၊ အခု အဖွဲ့ တစ်စုဆီက ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်ပေးကြပါဦး၊ ကိုယ် နောက်ထပ်ပန်းအိုး သုံးအိုးလိုနေတယ် အိမ်မှာ ပန်းပင် ၃ ပင် အပင်ခွဲဖို့ ရှိနေတယ်ကွ” လို့ နောက်လိုက်တော့ ကလေးတွေ တဟားဟားနဲ့ ရယ်မောကြတယ်၊ “ဆရာ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အလှဆုံး ပန်းအိုးလေးတွေ လုပ်ပေးလိုက်မယ်၊ ကျွန်တော်တို့ လက်ဆောင်ပေါ့” လို့ ကလေးတွေက ဆိုတယ်၊ အချိန်အကန့်အသတ်အတွင်း ပြီးအောင် ပြောရတဲ့အတွက် ပန်းအိုးလေးက သေသေသပ်သပ်ကြီးတော့ဖြစ်မနေပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေက သဘောကျလို့ ကျွန်တော်ဝမ်းသာရပါတယ်။
စနဲရှာနာနဲ့ ယဲလီနာတို့လည်းရောက်လာကြပြီ၊ သူတို့နှစ်ယောက်က ကလေးတွေကို ကူညီပေးနေကြတယ်။
ကျွန်တော့်ရှေ့က လူငယ်လေးတွေ စုရုံးပြီး ပုံသဏ္ဍာန် ကျကျနန ပန်းအိုးလေးတွေ ပုံဖော်နေကြတယ်၊ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမှာ သိပ်လှတဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါပဲ၊
လမ်းဘေးအုတ်ခုံမှာ ထိုင်ရင်း ဆေးလိပ်တွေ ဖွာရင်း၊
စကားဆန်းဆန်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေကို သင်ယူရွတ်ဆိုရင်း၊
စီးကရက်မီးခိုးငွေ့တွေ့နဲ့အတူ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂါတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို မှုန်ဝါးဝါးပုံဖော်နေတဲ့ လူငယ်လေးတွေ ...
သူတို့ကိုပါ .. ကျွန်တော် ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။ ။
အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၂၂၊
Special thanks to My Beloved Husband:
GreenScreenFest - http://www.greenscreenfest.org/
တို့လည်း အဲလို ပုံဖော်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ
အဲလို ပုံဖော်ပြရတာကို သဘောကျတယ်
ဆရာမလုပ်ရတဲ့ ခံစားချက်က ဘာနဲ့မှမတူဘူး.
အရာဝတ္ထုတွေကို ပုံဖော်ထုဆစ် ဘဝတွေကို ပုံဖော်ထုဆစ်
Campaign To End Violence Against Children
အကုတ်အခြစ်ကောင်းတဲ့ခွေးလေးလဲ့ရာကို ကျောယားရင် ကုတ...
Congratulation David !
Happy New Year for all friends !